Sida loo Play MKV on LG TV Si fudud
TV LG noqon kartaa awoodo inuu ciyaaro ka MKV faylasha? Waxaa hubaal in aad isku dayay waqti qaar ka mid ah. Laakiin strangely, qaar ka mid ah files MKV shaqeeyaan iyo qaar ka mid ah oo kaliya u muuqdaan in aanay noqon playable on TV LG ku aadan. Male waa xaq! Waxa uu diiday inuu u ciyaaro file MKV ah sababtoo ah codec ka aqlka audio ee file video ah. Waayo, macluumaad, MKV ah waa uun weel. Files MKV kala duwan waxay noqonaysaa inay ku jira kala duwan video iyo maqal ah codecs. Files ayaa MKV la codec audio aqlka (ie files MKV DTS) ma la ciyaari karaa TV LG ah. Xalka aad u waa in la helo qalab-saddexaad si ay u sameeyaan wax walba oo fudud ah. The Wondershare Video Converter waa mid ka mid ah fursadaha. Waa wax fiican, maxaa yeelay waxaad u isticmaali kartaa sida Converter video ah in hore loogu badalo files MKV aad ka dibna iyaga ciyaaro LG TV iyo sidoo kale aad u isticmaali kartaa si qulquli files MKV wixii codecs audio in aad LG TV inta ay leedahay taageero DLNA. Haddii aan, waa caadi haddii aad leedahay qalab geeyo sida Chromecast, Apple TV, Roku ama Madaxweyne Siilaanyo, PS3 ah.
No dheeraad ah oo hadlaya, aynu si toos ah ugu tago. First aad u baahan tahay si ay u soo bixi barnaamijkan iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Ka dibna aan arko tilmaan faahfaahsan oo ay u isticmaalaan Wondershare Video Converter si loogu badalo files MKV si uu u daawado ee LG TV iyo sidoo kale qulquli files MKV in LG TV.
Qeybta 1: Beddelaan MKV Faylal ay ka dibna Play on LG TV
Qeybta 2: il kasta MKV Faylal ay si LG TV
Fur barnaamijka ka dibna raac ah hage tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dajiyaan files MKV aad laba siyaabood oo kala duwan. Waxaad sidoo kale riixi kartaa ka button xitaa buugga deegaanka ama aad si fudud u dooran kartaa in aad jiidi-iyo-hoos u aad videos MKV deegaanka gal barnaamijka. Markaas, waxaad ka arki kartaa files doonaan muuqday saxaarad item bidix sida thumbnails.
2 Dooro qaabka filaayo in TV LG
Wuxuu furaa Qaabka Output hoos-hoos liiska qaab dooro LG TV ka Device> telefishinada sida qaab wax soo saarka. Goob default weyn shaqayn doontaa TV.
3 Play MKV on TV LG
Beddelaan MKV in TV LG ah oo ay taageerayaan qaab adigoo gujinaya ka badalo button rukun-midigta hoose ee suuqa ugu weyn ee. Tani Converter Video waa mid aad u hufan oo ku dhameysan doono diinta video in daqiiqo ah.
Ka dib qaab beddelidda, kuu soo gudbin karaan dhamaan faylasha la gediyay in drive USB ah ka dibna Radidiyaha files MKV aad on TV LG ah.
Fadlan daawado tutorial video hoose.
Fiiro gaar ah: Haddii kale, waxaad u isticmaali kartaa online video Converter oo lacag la'aan ah halkii. Ayaa qaab socon LG TV waa MP4, si aad u dooran kartaa MP4 in talaabada labaad.
Hubi in aad heysato TV LG ah in uu yahay DLNA taageeray ama qalab geeyo sida Chromecast, Roku, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo ama PS3 ah. Fiiri waxa model LG waa DLNA socon halkan .
1 Connect shabakadda
Hubi in qalab aad TV ama geeyo iyo sidoo kale aad PC ku xiran yihiin shabakad isku mid ah.
2 dar files MKV
Ka dib marka aad ku rakibtay Wondershare Video Converter Ultimate, ay plugin waxaa sidoo kale lagu rakibay oo waxay yeelan doonaan icon toobiye on desktop-ka --_ 1_698_1_ Media Server ah. Daahfurka Server Media in aad ku darto files MKV aad adigoo gujinaya Import ama digsi scan. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Computer ikhtiyaarka in ay dhex maraan si aad u hesho dhammaan faylasha on your computer.
3 Isku in qalab hoorto
Dhanka hoose, doorato qalabka geeyo sida aad LG TV smart ama chromecast, Roku, Apple TV a.
4 files Stream MKV in TV LG
Markaasay aad u baahan tahay in mouse ka badan file ah oo guji Play ku saabsan TV icon ku soo bixi doona. Ka dib markii ay sugayaan daqiiqo qaar ka mid ah, waxaad daawan kartaa files MKV aad LG TV si fudud.
La yaabka leh, miyaanay ahayn? Just download Wondershare Video Converter Ultimate si aad u hesho files MKV si aad u ciyaaro TV.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play MKV on LG TV